Taylor House Oasis kwintlango
I-Eclectic 1950's izihombiso zesitayile saseMelika. Ungahlala kwaye uphumle ngasechibini le-koi okanye idrayivu emfutshane ukuya kwi-adventure kuba sibekwe kumbindi weLas Vegas, Laughlin, Kingman kunye neGrand Canyon West. Uninzi lwee-opps zokukhwela intaba kunye neerempu zokukhwela isikhephe kwisithuba seyure.
Iikhabhathi zethu zikhululekile kwaye ziyamema. Iindwendwe ezininzi zinokubhukisha ubusuku obuninzi okanye zihlale kwipropathi ukuze zizole kunye nendalo, endaweni yokuphuma ziye kwiindawo ezikufutshane.
Siye sahlala apha phantse iminyaka engama-20. Ubomi bethu apha bunokuchazwa kakuhle njengoboxolo. Iindwendwe ezininzi azifuni ukuhamba.
Siyazithanda zonke iindwendwe zethu kwaye sisoloko sifumaneka ukuba sithethe kwaye sabelane ngesiselo kwaye sazane. Ndingafumaneka ngefowuni okanye nge-app ka-Airbnb.